पक्राउपछि प्रहरीसँग भारतीको बयानले प्रहरी नै चकित ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/पक्राउपछि प्रहरीसँग भारतीको बयानले प्रहरी नै चकित !
8,070 1 minute read
काठमाडौं । भारतीले आफुले गाँ’जा पि’उने ग’रेको कुरा स्वीकार गरेकी छिन् । एनसीबीले गाँ’जा रा’खेको आरोपमा चर्चित हास्य कलाकार भारतीलाई पक्राउ गरेको छ । शनिबार, एनसीबीले मुम्बईमा ३ स्थानमा छापा मारेपछि गाँ’जा फे’ला पारेको थियो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **